Ozi Nne na Nna / Onye Nlekọta | Lọ Akwụkwọ Oakleigh na Early Early Intervention Center
Oghere onye nchịkwa ụlọ akwụkwọ na Oakleigh School
Anyị kwenyere na iso ezinụlọ na-arụkọ ọrụ maka abamuru ụmụ ha na-eweta ọganiihu pụtara ìhè.
Mgbanwe n'ime Schoollọ Akwụkwọ
Tupu nwa gị amalite ụlọ akwụkwọ, anyị na-eme nleta ụlọ. Site na nke a, anyị na-ahazi ụbọchị mbido na nhazi maka etu nwa gị ga-esi wee banye na ụlọ akwụkwọ, gụnyere oge agụmakwụkwọ, nri ehihie, ịga akwụkwọ na nhọrọ edo.
A na-anabata ndị nne na nna / ndị nlekọta n'ụlọ akwụkwọ iji kwado mgbanwe ahụ n'akụkụ ndị ọrụ ụlọ akwụkwọ. Ozugbo nwa gị biri, nkwurịta okwu na ụlọ bụ site na ekwentị, izi ozi ederede, akwụkwọ ụlọ akwụkwọ kwa ụbọchị, ozi ịntanetị, yana Tapestry ebe ị nwere ike ịhụ foto na vidiyo nke mmụta niile na-atọ ụtọ nwa gị na-eme. E nwere akwụkwọ akụkọ oge anafe ozi na webụsaịtị, na-enye ọtụtụ ozi.
Na mbido Oge Mgbụsị akwụkwọ, a na-akpọ ndị nne na nna ka ha bịa zute Nnukwu Otu Multidisciplinary na ụlọ akwụkwọ ahụ.
Ọ na-amasị anyị ịbịa leta gị n'ụlọ, n'ihi na anyị nwere ike ịhụ ka nwa gị si nọrọ n'ụlọ ha wee rụọ ọrụ ọnụ n'akụkụ nke mmepe ha anyị kwesịrị ịrụkọ ọrụ ọnụ. Ihe si na nleta ụlọ a nwere ike ịgụnye ntinye aka na Team Team Support anyị.
Kedu otu anyị si enyocha ọganihu
A na-edekọ ọganihu ụmụaka na mmezu ha kwa ụbọchị site n'aka ndị ọrụ klaasị na ọtụtụ ihe akaebe nke ọganihu na-etinye na ndekọ Tapestry ha n'ịntanetị, yabụ enwere ike ịkekọrịta ya na ezinụlọ.
Ndị ọhụụ ọhụụ nwere nyocha ọganiihu ha n’ime ọnwa isii mbụ ha bidoro akwụkwọ. Ndị ọkachamara niile metụtara nwa gị ga-ede akụkọ maka nyocha a nke a na-akọrọ ndị nne na nna / ndị nlekọta. A na-akpọ ndị nne na nna / ndị nlekọta òkù ka ha bịa ma jiri onyinye ha kpọrọ ihe nke ukwuu ma hụ ha dị oke mkpa.
A na-enyocha atụmatụ ahụike na nlekọta nwa gị kwa afọ (ma ọ bụ isii kwa ọnwa ma ọ bụrụ na ha erughị afọ 5) ebe ndị nkuzi na ndị nne na nna / ndị nlekọta na-atụle ọganihu site na nsonaazụ mmụta.
A ga-egosiputa nke a na Mmemme Mmụta nke Nwa gị, nke gosipụtara ebumnuche na usoro nkuzi iji nyere nwa gị aka imezu ihe mmụta ndị ahụ.
Ozi gbasara nwa gị
Nwa ọ bụla nwere ndekọ nke ọganihu ha, echekwara na sava ụlọ akwụkwọ, nke gụnyere akụkọ, Atụmatụ Mmụta Onwe, foto na vidiyo. Meela ka ị hụ ndekọ nwa gị.
Uwe akwụkwọ anyị ugbu a bụ iwu. Anyị na-akwado ya nke ọma dịka ọ bụ uwe dị mma ma dị mma maka ụmụaka.
Uwe akwukwo Smith dị na Enfield na Ogwe Potters, bụ ndị na-eweta anyị. You nwere ike ịbanye n'ụlọ ahịa ma ọ bụ nye iwu n'ịntanetị, ha ga-ebuga ụlọ akwụkwọ ahụ. Nwere ike ibudata Orderdị Orderkpụrụ Ebe a.
Gaa na ebe nrụọrụ weebụ
Fọdụ ndị nne na nna / ndị nlekọta na-eweta ma chịkọta ụmụ ha kwa ụbọchị, ụfọdụ na-ejikwa ya Sistemụ njem ụgbọ njem. Enwere ike ichikota umuaka wee buputa n'ulo, ma obu mgbe ufodu na tagzi. Ọ bụ naanị ndị nne na nna na ndị nlekọta na-ekpebi ma ha ga-eji usoro a ma ọ bụ na ha agaghị eji ya; Agbanyeghị ịkwesịrị ịgbaso ụfọdụ njirisi iji tinye maka enyemaka ụgbọ njem.
Busgbọ ala ọ bụla ma ọ bụ tagzi nwere onye ọkwọ ụgbọ ala na ndị escort, onye na-anọnyere ụmụaka mgbe niile ma na-eweta ozi, ego wdg na azụ na-aga n'ihu n'etiti ụlọ na ụlọ akwụkwọ.
Ndị nne na nna / ndị nlekọta kwesịrị jupụta na fọm arịrịọ maka enyemaka njem nke a na-eziga ya Transport.brokering@barnet.gov.uk, wee gaa otu panel maka mkpebi.
A na-ahazi njem ahụ n'etiti, site n'aka Barnet, ọ nweghịkwa n'okpuru ụlọ akwụkwọ. Nọmba kọntaktị ahụ bụ 020 8359 2000.
Ajuju ndi ozo a na-acho maka umuaka nke na-eji usoro ime njem di na 020 8359 5110.
#StayAtHome - Ezigbo Nne Arịrịọ na Ozi Nri akwukwo ulo akwukwo Nri akwukwo ulo akwukwo na ego umu akwukwo Nkwụ ụgwọ dị n'ịntanetị dị mfe
Olọ akwụkwọ 2022 Oakleigh & Oge Mmalite